【 ဆောငျးပါး 】 “ဂနျးမယျတျောကို ဥပဒဘေောငျအတှငျး ချေါလာနိုငျပါ့မလား” | Opinion Leaders
【 ဆောငျးပါး 】 “ဂနျးမယျတျောကို ဥပဒဘေောငျအတှငျး ချေါလာနိုငျပါ့မလား”
၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈ ဝနျးကငျြဟု ထငျပါသညျ။ခုနှဈကို အတိအကြ မမှတျမိတော့သျောလညျး ၁၉၈၈ နောကျပိုငျး နဝတအစိုးရ လကျထကျဟု သသေခြောခြာ မှတျမိနပေါသညျ။အစိုးရက ဈေးကှကျစီးပှားရေးစနဈ ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးပွီဟု ဆိုသညျ။သို့ဖွငျ့ ၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ထိ စီးပှားရေးကို အစိုးရက ခြုပျကိုငျထားရာမှ စဈတပျ၊ စဈအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ သူတို့၏ သားသမီးဆှမြေိုးမြား၊ သူတို့နှငျ့ ရငျးနှီးနီးစပျသူမြား စီးပှားရေးလုပျသညျ့ခတျေ ဖွဈလာပါသညျ။
သတငျးစာ၊ ဂြာနယျမြားတှငျ ငှရေေးကွေးရေး လုပျကိုငျသညျ့ ပုဂ်ဂလိကအမညျမြား ပါလာသညျ။ကွငွောကောငျးကောငျးဖွငျ့ ကွျောငွာကွသညျ။မှတျမိသမြှ ဧရာမွသေညျ ပထမဆုံးပျေါလာသညျ့ ပုဂ်ဂလိက ငှကွေေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျး ဖွဈသညျ။ဧရာမွတှေငျ ငှအေပျနှံသူမြား၏ အပျနှံငှအေပျေါ တဈလအတိုး ၅ ရာခိုငျနှုနျး ပွနျခံစားခှငျ့ပေးသညျ။ဧရာမွတှေငျ အငွိမျးစားအမြားစုက တဈသကျလုံးလုပျမှ ရလာသညျ့ ငှကွေေးမြားကို သှားရောကျအပျနှံကွသညျ။အပျနှံငှအေပျေါ ၅ ရာခိုငျနှုနျး လစဉျ အတိုးမှနျမှနျရသညျ့ သတငျးမှာ ပငျစငျစားမြား၊ ငှရှေိပါလကျြ မညျသညျ့စီးပှားရေးမှ မလုပျတတျသူထံ ပြံ့နှံ့လာသညျ။သို့ဖွငျ့ တစတစ ငှအေပျသူမြားလာရာ ဧရာမွကေဲ့သို့ တခွားငှကွေေးဝနျဆောငျမှုမြား ပျေါပေါကျလာသညျ။
သစ်စာပနျးခငျး၊ မုဒိတာ၊ လငျးသစ်စာ စသဖွငျ့ လှတပတလေးမြား ဖွဈကွပါသညျ။လုပျထုံးလုပျနညျးကလညျး မခေ။ဘဏျတှငျ ငှအေပျသကဲ့သို့ မှတျပုံတငျနံပတျ၊ အမညျ၊ လိပျစာ အခကျြအလကျ ပွညျ့စုံစှာရေး သှငျးရသညျ။သူတို့ဘကျက ဘဏျငှစေုစာအုပျကဲ့သို့ စာအုပျငယျလေးကို ပွနျထုတျပေးသညျ။လစဉျ အတိုးလာထုတျသညျ့အခါ ထိုစာအုပျငယျနှငျ့ မှတျပုံတငျ ပွသရသညျ။အဆိုပါ ငှကွေေးဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြားသညျ ပုနျးလြှိုးကှယျလြှိုး ဖှငျ့ခွငျးမဟုတျ။အလုပျခနျး၊ ရုံးခနျး၊ စီမံအုပျခြုပျသူ၊ ဝနျထမျး အပွညျ့အစုံဖွငျ့ တရားဝငျ လုပျငနျးသဖှယျ ပွောငျပွောငျတငျးတငျး လုပျကိုငျကွခွငျး ဖွဈပါသညျ။
နှဈခြီကွာလာသောအခါ သစ်စာပနျးခငျး၊ ဧရာမွတေို့ နညျးတူ လုပျကိုငျလာသညျ့ အဖှဲ့မြားလာသညျ။သို့ဖွငျ့ ယုံကွညျသူ မြားလာသညျ။တခြို့က နထေိုငျသညျ့ အိမျခွံမြားကို ရောငျးခလြိုကျပွီး ထိုဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားတှငျ ငှအေပျလိုကျသညျ။
ရသညျ့အတိုးသညျ အိမျငှားခ အပါအဝငျ တဈလအသုံးစရိတျအတှကျ ကောငျးကောငျးလုံလောကျသညျဟူသော တှကျကိနျးဖွငျ့ အိမျရောငျးပဈလိုကျကွသညျ။သူတို့တှငျ လစဉျပုံမှနျဝငျငှဖွေငျ့ ရပျတညျနိုငျပွီဟု ငှအေပျထားသူမြား စိတျအေးလကျအေး ရှိလာခြိနျတှငျ အဆိုပါ ငှကွေေးဝနျဆောငျမှု အလုပျခနျးမြား ပိတျသှားတော့သညျ။အလုပျခနျးမြားကို ယတိပွတျပိတျပဈသညျ မဟုတျဘဲ၊ လစဉျပေးနကွေ အတိုးမပေးတော့။
ငှသှေားထုတျသူမြားသညျ အဓိကတာဝနျရှိသူမြားကို မတှရေ့တော့ဘဲ ဘာမြှဖွရှေငျးမပေးနိုငျသညျ့ ရုံးစောငျ့ကဲ့သို့ အောကျခွဝေနျထမျးကိုသာ တှရေ့တော့သညျ။
ငှအေပျထားသူမြား ပြာယာခတျသှားကွသညျ။ဟိုတိုငျသညျတိုငျ တိုငျကွသညျ။တဖွေးဖွေးဖွရှေငျး ပေးမယောငျယောငျ အသံထှကျလာသျောလညျး မကွာမီ အဆိုပါအလုပျခနျးမြားအားလုံး ပိတျသှားတော့သညျ။ထိုလုပျငနျးမြားကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး လုပျနကွေောငျး တလောကလုံး သိသျောလညျး၊ ငှအေပျနှံခံရသူမြား လကျလှတျဖွဈ ကနျြရဈခြိနျတှငျ မညျသူမှ ထှကျဖွရှေငျးမပေး။
ဘယျကိုမှတိုငျ၍ အရာမရောကျဘဲ၊ မိမိတို့ အပျနှံထားသညျ့ ငှမြေား ပွနျရနိုးမြှျောကိုးရငျး ယနထေိ့ တဈပွားတဈခပျြမှ ပွနျမရကွတော့ပေ။အသိ ပငျစငျစားလငျမယားဆိုလြှငျ သားသမီးမရှိ၍ လငျကိုယျမယား ၂ ယောကျထဲ အိမျငှားနမေညျဟု တှကျခကျြလကျြ အိမျနှငျ့ခွံကိုရောငျးပွီး ဧရာမွတှေငျ ငှအေားလုံး သှားအပျလိုကျသညျ။သူတို့ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျ၏ ပငျစငျလခမှာ စားစရိတျပငျ အနိုငျနိုငျသုံးရသညျဖွဈရာ အသိမိတျဆှမြေားထံ နထေိုငျရငျး ဇနီးက ပထမ ဆုံးပါးသှားသညျ။ခငျပှနျးဖွဈသူက ဇနီးဆုံးပွီး တဈနှဈကြျောကွာတှငျ ဆုံးပါးခဲ့ကွပါသညျ။
ထို့နောကျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ MLN ချေါ မာလျတီလယျဘယျ ရောငျးဝယျရေးချေါ ဆငျ့ပှားခြိတျဆကျ ရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး ပျေါလာသညျ။ပထမဆုံးမှတျမိသညျမှာ လငျဇီးဆေး ဖွဈပါသညျ။သညျဆငျ့ပှားခြိတျဆကျ ရောငျးဝယျရေးလုပျငနျးတှငျ ပါဝငျသူမြားသညျ ပထမသငျတနျးပို့ခသြညျကို တကျရောကျနားထောငျရသညျ။ထိုသငျတနျးတှငျ အသငျးသားအဖွဈ ပါဝငျရုံဖွငျ့ ခံစားရမညျ့ အကြိုးအမွတျ၊ မိမိ၏လကျအောကျတှငျ ဆငျ့ပှားလူစုပေးနိုငျပါက လူတဈယောကျရတိုငျး မိမိရရှိမညျ့ အကြိုးအမွတျ စသညျမြားကို သှားရညျကလြောကျအောငျ ပွောပွကွသညျ။
လငျဇီးဆေး နာမညျကွီးသကဲ့သို့ လငျဇီးဆေး ရောငျးဝယျရေး အဖှဲ့ကွီးကလညျး ကွီးမားလာသညျ။စာရေးသူကိုယျတိုငျ လငျဇီးဆေး ရောငျးရမညျ့သငျတနျး ၂ ကွိမျတကျဖူးပါသညျ။ လူနာရှာရမညျ။လငျဇီးသညျ ၉၆ ပါးရောဂါ ပြောကျကွောငျး အညှနျးကောငျးကောငျးပွောပွီး သိနျးခြီသညျ့ ဈေးနှုနျးဖွငျ့ ရောငျးခရြမညျ။သငျတနျး ၂ ကွိမျတကျပွီးနောကျ စဉျးစားပါသညျ။
မိမိသညျ ဆရာဝနျမဟုတျဘဲ လူနာကို လငျဇီးဆေးရောငျးပွီး ရောဂါပြောကျကွောငျးကို ငှရေလို၍ လုပျပွီဆိုပါစို့။
တဈ - လငျဇီးဆေးသညျ ၉၆ ပါးရောဂါ ပြောကျကွောငျး ပါးစပျမှ ပွောထှကျမညျမဟုတျ။
နှဈ - ဆေးတနျဖိုးကို ပွောထှကျမညျမဟုတျ။
သုံး - အကယျ၍ လူနာ တိမျးပါးခဲ့သျော. . .
ထို့နောကျ ယငျးသငျတနျးကို ဆကျမတကျဘဲ ယတိပွတျ ဖွတျခလြိုကျပါသညျ။လငျဇီးဆေး ရောငျးဝယျမှုကား ဆကျလကျရှငျသနျနပေါသညျ။သို့သျော စာရေးသူသညျ အလားတူပျေါလာသညျ့ မညျသညျ့ ဆငျ့ပှားလူစုရောငျးဝယျရေးကိုမြှ စိတျမဝငျစားတော့ပါ။
တဈရကျတှငျ စာရေးသူ၏ ရုံးခနျးသို့ တပညျ့မလေးတဈယောကျ ရောကျလာပါသညျ။ထိုတပညျ့မလေးသညျ စာရေးသူ လကျအောကျတှငျ အလုပျ လုပျခဲ့ဖူးပါသညျ။နောကျပိုငျး အိမျထောငျကပြွီး ကလေး ၂ ယောကျ ရလာခြိနျတှငျ အလုပျမှ ထှကျသှားသညျ။တပညျ့မလေးက သူသညျ ဆငျ့ပှားရောငျးဝယျရေး လုပျငနျးတဈခုတှငျ အသငျးဝငျပွီး သူတို့ကုမ်ပဏီကရောငျးသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို လာရောငျးခွငျးဖွဈပါသညျ။အလှနျတကျကွှနသေညျ။
သူ မကွာမီ အရငျးအနှီး အမွောကျအမွားရမညျ့ လုပျငနျးဟု ယုံကွညျနသေညျ။တပညျ့မလေးဖွဈနေ၍ သညျလုပျငနျး၏ သဘောသဘာဝကိုရှငျးပွပွီး ထှကျလိုကျရနျ နားခပြါသညျ။
မအောငျမွငျသညျ့အပွငျ စာရေးသူကိုပါ အသငျးဝငျရနျ တရားဟောပါသညျ။စာရေးသူအသငျးဝငျပါက သူ့လကျအောကျမှ လူတဈယောကျ သူရပွီဖွဈရာ စာရေးသူဝယျသမြှ တနျဖိုးထဲမှ သူခံစားခှငျ့ရမညျ ဖွဈပါသညျ။အပွငျတှငျ သရေောကွရေော ၂၀၀၀ ခနျ့ ပေးရမညျ့ သှားတိုကျဆေးကို သူ့ထံမှ ၁၅၀၀၀ ဖွငျ့ ဝယျလိုကျရပါသညျ။
၂ ပတျ တဈခါခနျ့ တပညျ့မလေး ရောကျလာတတျပါသညျ။ပစ်စညျးမြား လာရောငျးပါသညျ။သူတကျကွှလကျြရှိသညျ။သူ့ကို ကုမ်ပဏီက မကွာမီ ထိုငျးသို့ စလှေတျမညျဆို၏။သညျလိုဆိုတော့လညျး မဆိုးပါလားဟု တှေးမိပါသညျ။သို့သျော နောကျတဈလခနျ့အကွာ၌ တပညျ့မလေး ရောကျလာခြိနျတှငျ မကျြနှာမသာယာတော့ပါ။
ထိုငျးကို မိမိစရိတျဖွငျ့ မိမိသှားရခွငျးဖွဈသညျ။ထိုငျးစကားပွနျမှ တဆငျ့ပေးသညျ့ တဈရကျသငျတနျးကလညျး ဘာမှထှထှေထေူးထူးမဟုတျ။အပေါစား တညျးခိုခနျးတှငျ နခေဲ့ရစားခဲ့ရသညျ။ပထမဆုံးအကွိမျ တပညျ့မလေးထံမှ ညညျးညူသံ ထှကျလာသညျ။
“ဆရာမပွောသလိုပါပဲ။အသငျးဝငျတှကေို မကျလုံးပေးပွီး လုပျစားနတောပါ ဆရာမရယျ။တခြို့ဆို ကြှနျမထကျ အဖွဈဆိုးပါတယျ။ကြှနျမက ယောက်ခမနဲ့ မနခေငျြလို့ အိမျခှဲနခေငျြလို့ ငှရေမလား လုပျတာပါ ဆရာမရယျ။တခြို့ နယျက ကလေးတှဆေို ခွံပေါငျ လယျပေါငျနဲ့ ဝငျလုပျနကွေတာ။သူတို့လညျး မှားမှနျးသိပမေဲ့ ငှကေ ပစ်စညျးဝယျရတဲ့ထဲ ဝငျနတေော့ ဆကျလုပျနကွေတာပါ။”
နောကျ ၂ ပတျအကွာတှငျ ထိုတပညျ့မလေး သူ့ကိုယျသူ သတျသသှေားပါသညျ။အဆိုပါ ထိုငျးအလှကုနျနှငျ့ လူသုံးကုနျပစ်စညျး ရောငျးဝယျရေး ယူရငျကုနျပွီဆိုလား နာမညျမမှတျမိတော့သော ကုမ်ပဏီသို့ ဝငျဝငျခွငျး ငှေ ၁၀ သိနျးဖိုး ပစ်စညျးဝယျရသညျ။ထိုပစ်စညျးမြားကို လညျရောငျးရသညျ။မစားရဝခမနျး စကားမြား ပွောရသညျ။တငျနသေော ကွှေးတှကေလညျး ပိလာသညျ။သို့ဖွငျ့ စိတျဖိစီးမှုနှငျ့ နောငျတရမှုဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘဲ သူ့ကိုယျသူ အဆုံးစီရငျသှားသညျ။တပညျ့မလေး ဆုံးပါးခဲ့သညျမှာ ၅ နှဈခနျ့ ရှိပါပွီ။မကွာမီက အစိုးရက ဥပဒဖွေငျ့ MLM လုပျငနျးမြားကို ပိတျလိုကျသောအခါ တပညျ့မလေးသာ တမလှနျက မွငျနိုငျ၊ ကွားနိုငျမညျဆိုပါက ဝမျးမွောကျရှာမညျဟု တှေးတောမိပါသညျ။
ဖစျေ့ဘုတျဖှငျ့လြှငျ ဖတျရသညျ့ ရဲသတငျး၊ မာတုကာမနှငျ့ နထေိုငျသညျ့ ဘုနျးကွီးသတငျး၊ သနေတျကိုငျမညျဟု ကွိမျးမောငျးသညျ့ ဘုနျးကွီးသတငျးမြားအပွီး သနေတျကိုငျထားသော ရသဝေ့တျ အမြိုးသမီးပုံ တကျလာပွီး သူနှငျ့ဆကျစပျသညျ့ သတငျးမြားပါ တကျလာပါသညျ။ရသမေ့သညျ ဟိတျနှငျ့ ဟနျနှငျ့ ဗဒေငျဟောခနျး ဖှငျ့ထားပွီး လိမျထားသညျ့ ငှမြေားမှာ နညျးနညျးနောနောမဟုတျ။အလိမျခံရသူမြားမှာလညျး ဒိတျဒိတျကွဲတှေ။ယခုအလိမျခံရသူမြားက တိုငျကွတောကွ ဝိုငျးကွသောအခါ အဆိုပါရသမေ့သညျ ပြောကျခွငျးမလှ ပြောကျသှားပွီ ဆိုပါသညျ။
၈၈ အရေးအခငျးတုနျးက အာဏာပိုငျတို့ အလိုရှိသူမြားမှာ ဘယျနရောပုနျးပုနျး ဖမျးမမိသညျဟု မရှိစရေ။ပိုကျစိတျတိုကျ ရှာဖှဖေမျးဆီးနိုငျခဲ့သညျမှာ အားလုံးအသိ။ယခု ရသမေ့သညျ အသှငျပွောငျးထားဦးတော့ တကယျအလုပျလုပျမညျဆိုလြှငျ ပွေးပေါကျမရှိပါ။သို့သျော တိုကျခနျးကွီးပျေါတှငျ ခမျးနားထယျဝါစှာ ဟိတျဟနျတဈလုံးနှငျ့ အယုံသှငျးပွီး အောငျမွငျစှာ ငှအေမွာကျအမွား လိမျယူနိုငျခဲ့သညျ။ယခုမှ သူ့နောကျကွောငျးကို လိုကျကွရာ ထောငျသုံးခါကပြွီး လှတျလာသူ ဖွဈနသေညျ။မယျတျောကွီးဟု ကုနျးဦးခသြူမြားကို အဘယျမြှ ကွိတျရယျမောသှားလမေညျကား မသိ။
၁၉၈၈ နောကျပိုငျးမှ ယနထေိ့ ငှကွေေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျး၊ MLM ရောငျးဝယျမှုလုပျငနျး၊ ရသမေ့ နန်ဒမာလာ ငှလေိမျမှုတို့သညျ အကွီးစား လိမျလညျလှညျ့ဖွားမှုမြား ဖွဈကွပါသညျ။သညျကွားထဲ ထီပေါကျသညျဟု လိမျလညျမှု၊ ကံစမျးမဲပေါကျသညျဟု လိမျလညျမှု၊ ရဲဟနျဆောငျမှု၊ စဈဗိုလျဟနျဆောငျမှုမြား ဒငျးကွမျးထခဲ့ပါသညျ။မွနျမာမြား ဘာကွောငျ့ အလှယျတကူ အကွိမျကွိမျ လိမျညာအသုံးခြ ခံကွရပါသနညျး အဖွရှောသျော မွနျမာတို့၏ ယုံလှယျသော အကငျြ့နှငျ့ လောဘဦးစီးလာသောအခါ အမှနျကို မမွငျနိုငျတော့ခွငျး၊ မဆငျခွငျ မသုံးသပျနိုငျခွငျးဟူသညျ့ အားနညျးခကျြမြားကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။တဈဘကျက ကလြောကျအောငျ ပွောသောအခါ သသေခြောခြာ မဆနျးစဈတော့ဘဲ အလှယျတကူယုံခွငျး အကငျြ့ကို မွနျမာတို့တှငျ စှဲနပေါသညျ။ထို့ပွငျ ငါးဖမျးရနျ ငါးစာခကြှေးသညျ၌ ငါးစာကိုသာမွငျပွီး ငါးမြှားခြိတျကို မမွငျဘဲ စားလိုဇော (ရလိုဇော) ဖွငျ့ ငါးစာကို ဟပျလိုကျရာ ငါးမြှားခြိတျတှငျ တနျးလနျးပါရသော ငါးကဲ့သို့ ဖွဈကွရပါသညျ။
MLM ရောငျးဝယျရေး စနဈသညျ လိမျညာမှုမဟုတျပါဟု စောဒကတကျသူမြား ရှိကွပါမညျ။ရောငျးသူဝယျသူ ကနြေပျ၍ လုပျကိုငျကွသညျ့ အလုပျဟု ဆငျခွပေေးမညျပငျ။တဈကပျြတနျသော ပစ်စညျးကို ၁၀ ဖွငျ့ ဝယျရပွီး တဈထောငျဖွငျ့ ပွနျရောငျးရသညျ့ အလုပျသညျ လိမျညာလှညျ့ဖွားခွငျး ပါဝငျနပေါသညျ။ဧရာမွကေဲ့သို့ ငှကွေေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျး လုပျကိုငျခဲ့သူ ယုံကွညျအပျနှံသူမြား၏ ငှမြေားကို ‘မ’ ယူသှားသူမြားအားလုံး ဘေးကငျးရနျကှာ လှတျကငျးခဲ့ကွပါသညျ။MLM လုပျငနျးကို အငျအယျလျဒီအစိုးရ လကျထကျတှငျ အစသတျပေးလိုကျပါသညျ။
တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို တှငျတှငျပွောခဲ့သော ပွောနဆေဲဖွဈသော လကျရှိအစိုးရသညျ ဂနျးကိုငျခဲ့သညျ့ မယျတျောကွီးကို ဥပဒဘေောငျတှငျး ဆှဲချေါလာနိုငျမညျလား အလိမျခံရသူမြားက မြှျောလငျ့နကွေပါသညျ။အစိုးရသညျ မယျတျောကွီးကို ဆှဲချေါလာနိုငျစှမျးရှိလြှကျ နမူနာပွ စဈဆေးအပွဈပေးနိုငျမညျဆိုပါက တရားဥပဒစေိုမိုးမှု အကြိုးကို အတနျအသငျ့ ဖျောဆောငျပေးနိုငျဟု လကျခံကွရမညျ ဖွဈပါသညျ။
ဒီဇငျဘာ - ၈
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်ဟု ထင်ပါသည်။ခုနှစ်ကို အတိအကျ မမှတ်မိတော့သော်လည်း ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း နဝတအစိုးရ လက်ထက်ဟု သေသေချာချာ မှတ်မိနေပါသည်။အစိုးရက ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီဟု ဆိုသည်။သို့ဖြင့် ၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ထိ စီးပွားရေးကို အစိုးရက ချုပ်ကိုင်ထားရာမှ စစ်တပ်၊ စစ်အရာရှိကြီးများနှင့် သူတို့၏ သားသမီးဆွေမျိုးများ၊ သူတို့နှင့် ရင်းနှီးနီးစပ်သူများ စီးပွားရေးလုပ်သည့်ခေတ် ဖြစ်လာပါသည်။
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိကအမည်များ ပါလာသည်။ကြေငြာကောင်းကောင်းဖြင့် ကြော်ငြာကြသည်။မှတ်မိသမျှ ဧရာမြေသည် ပထမဆုံးပေါ်လာသည့် ပုဂ္ဂလိက ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ဧရာမြေတွင် ငွေအပ်နှံသူများ၏ အပ်နှံငွေအပေါ် တစ်လအတိုး ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ခံစားခွင့်ပေးသည်။ဧရာမြေတွင် အငြိမ်းစားအများစုက တစ်သက်လုံးလုပ်မှ ရလာသည့် ငွေကြေးများကို သွားရောက်အပ်နှံကြသည်။အပ်နှံငွေအပေါ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း လစဉ် အတိုးမှန်မှန်ရသည့် သတင်းမှာ ပင်စင်စားများ၊ ငွေရှိပါလျက် မည်သည့်စီးပွားရေးမှ မလုပ်တတ်သူထံ ပျံ့နှံ့လာသည်။သို့ဖြင့် တစတစ ငွေအပ်သူများလာရာ ဧရာမြေကဲ့သို့ တခြားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
သစ္စာပန်းခင်း၊ မုဒိတာ၊ လင်းသစ္စာ စသဖြင့် လှတပတလေးများ ဖြစ်ကြပါသည်။လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကလည်း မခေ။ဘဏ်တွင် ငွေအပ်သကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်နံပတ်၊ အမည်၊ လိပ်စာ အချက်အလက် ပြည့်စုံစွာရေး သွင်းရသည်။သူတို့ဘက်က ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်ကဲ့သို့ စာအုပ်ငယ်လေးကို ပြန်ထုတ်ပေးသည်။လစဉ် အတိုးလာထုတ်သည့်အခါ ထိုစာအုပ်ငယ်နှင့် မှတ်ပုံတင် ပြသရသည်။အဆိုပါ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဖွင့်ခြင်းမဟုတ်။အလုပ်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူ၊ ဝန်ထမ်း အပြည့်အစုံဖြင့် တရားဝင် လုပ်ငန်းသဖွယ် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ကိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ချီကြာလာသောအခါ သစ္စာပန်းခင်း၊ ဧရာမြေတို့ နည်းတူ လုပ်ကိုင်လာသည့် အဖွဲ့များလာသည်။သို့ဖြင့် ယုံကြည်သူ များလာသည်။တချို့က နေထိုင်သည့် အိမ်ခြံများကို ရောင်းချလိုက်ပြီး ထိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ငွေအပ်လိုက်သည်။
ရသည့်အတိုးသည် အိမ်ငှားခ အပါအဝင် တစ်လအသုံးစရိတ်အတွက် ကောင်းကောင်းလုံလောက်သည်ဟူသော တွက်ကိန်းဖြင့် အိမ်ရောင်းပစ်လိုက်ကြသည်။သူတို့တွင် လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ပြီဟု ငွေအပ်ထားသူများ စိတ်အေးလက်အေး ရှိလာချိန်တွင် အဆိုပါ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အလုပ်ခန်းများ ပိတ်သွားတော့သည်။အလုပ်ခန်းများကို ယတိပြတ်ပိတ်ပစ်သည် မဟုတ်ဘဲ၊ လစဉ်ပေးနေကြ အတိုးမပေးတော့။
ငွေသွားထုတ်သူများသည် အဓိကတာဝန်ရှိသူများကို မတွေ့ရတော့ဘဲ ဘာမျှဖြေရှင်းမပေးနိုင်သည့် ရုံးစောင့်ကဲ့သို့ အောက်ခြေဝန်ထမ်းကိုသာ တွေ့ရတော့သည်။
ငွေအပ်ထားသူများ ပျာယာခတ်သွားကြသည်။ဟိုတိုင်သည်တိုင် တိုင်ကြသည်။တဖြေးဖြေးဖြေရှင်း ပေးမယောင်ယောင် အသံထွက်လာသော်လည်း မကြာမီ အဆိုပါအလုပ်ခန်းများအားလုံး ပိတ်သွားတော့သည်။ထိုလုပ်ငန်းများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်နေကြောင်း တလောကလုံး သိသော်လည်း၊ ငွေအပ်နှံခံရသူများ လက်လွတ်ဖြစ် ကျန်ရစ်ချိန်တွင် မည်သူမှ ထွက်ဖြေရှင်းမပေး။
ဘယ်ကိုမှတိုင်၍ အရာမရောက်ဘဲ၊ မိမိတို့ အပ်နှံထားသည့် ငွေများ ပြန်ရနိုးမျှော်ကိုးရင်း ယနေ့ထိ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပြန်မရကြတော့ပေ။အသိ ပင်စင်စားလင်မယားဆိုလျှင် သားသမီးမရှိ၍ လင်ကိုယ်မယား ၂ ယောက်ထဲ အိမ်ငှားနေမည်ဟု တွက်ချက်လျက် အိမ်နှင့်ခြံကိုရောင်းပြီး ဧရာမြေတွင် ငွေအားလုံး သွားအပ်လိုက်သည်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်၏ ပင်စင်လခမှာ စားစရိတ်ပင် အနိုင်နိုင်သုံးရသည်ဖြစ်ရာ အသိမိတ်ဆွေများထံ နေထိုင်ရင်း ဇနီးက ပထမ ဆုံးပါးသွားသည်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးဆုံးပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာတွင် ဆုံးပါးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် MLN ခေါ် မာလ်တီလယ်ဘယ် ရောင်းဝယ်ရေးခေါ် ဆင့်ပွားချိတ်ဆက် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ပေါ်လာသည်။ပထမဆုံးမှတ်မိသည်မှာ လင်ဇီးဆေး ဖြစ်ပါသည်။သည်ဆင့်ပွားချိတ်ဆက် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သူများသည် ပထမသင်တန်းပို့ချသည်ကို တက်ရောက်နားထောင်ရသည်။ထိုသင်တန်းတွင် အသင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ရုံဖြင့် ခံစားရမည့် အကျိုးအမြတ်၊ မိမိ၏လက်အောက်တွင် ဆင့်ပွားလူစုပေးနိုင်ပါက လူတစ်ယောက်ရတိုင်း မိမိရရှိမည့် အကျိုးအမြတ် စသည်များကို သွားရည်ကျလောက်အောင် ပြောပြကြသည်။
လင်ဇီးဆေး နာမည်ကြီးသကဲ့သို့ လင်ဇီးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ့ကြီးကလည်း ကြီးမားလာသည်။စာရေးသူကိုယ်တိုင် လင်ဇီးဆေး ရောင်းရမည့်သင်တန်း ၂ ကြိမ်တက်ဖူးပါသည်။ လူနာရှာရမည်။လင်ဇီးသည် ၉၆ ပါးရောဂါ ပျောက်ကြောင်း အညွှန်းကောင်းကောင်းပြောပြီး သိန်းချီသည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချရမည်။သင်တန်း ၂ ကြိမ်တက်ပြီးနောက် စဉ်းစားပါသည်။
မိမိသည် ဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲ လူနာကို လင်ဇီးဆေးရောင်းပြီး ရောဂါပျောက်ကြောင်းကို ငွေရလို၍ လုပ်ပြီဆိုပါစို့။
တစ် - လင်ဇီးဆေးသည် ၉၆ ပါးရောဂါ ပျောက်ကြောင်း ပါးစပ်မှ ပြောထွက်မည်မဟုတ်။
နှစ် - ဆေးတန်ဖိုးကို ပြောထွက်မည်မဟုတ်။
သုံး - အကယ်၍ လူနာ တိမ်းပါးခဲ့သော်. . .
ထို့နောက် ယင်းသင်တန်းကို ဆက်မတက်ဘဲ ယတိပြတ် ဖြတ်ချလိုက်ပါသည်။လင်ဇီးဆေး ရောင်းဝယ်မှုကား ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါသည်။သို့သော် စာရေးသူသည် အလားတူပေါ်လာသည့် မည်သည့် ဆင့်ပွားလူစုရောင်းဝယ်ရေးကိုမျှ စိတ်မဝင်စားတော့ပါ။
တစ်ရက်တွင် စာရေးသူ၏ ရုံးခန်းသို့ တပည့်မလေးတစ်ယောက် ရောက်လာပါသည်။ထိုတပည့်မလေးသည် စာရေးသူ လက်အောက်တွင် အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး ၂ ယောက် ရလာချိန်တွင် အလုပ်မှ ထွက်သွားသည်။တပည့်မလေးက သူသည် ဆင့်ပွားရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အသင်းဝင်ပြီး သူတို့ကုမ္ပဏီကရောင်းသည့် ပစ္စည်းများကို လာရောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။အလွန်တက်ကြွနေသည်။
သူ မကြာမီ အရင်းအနှီး အမြောက်အမြားရမည့် လုပ်ငန်းဟု ယုံကြည်နေသည်။တပည့်မလေးဖြစ်နေ၍ သည်လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝကိုရှင်းပြပြီး ထွက်လိုက်ရန် နားချပါသည်။
မအောင်မြင်သည့်အပြင် စာရေးသူကိုပါ အသင်းဝင်ရန် တရားဟောပါသည်။စာရေးသူအသင်းဝင်ပါက သူ့လက်အောက်မှ လူတစ်ယောက် သူရပြီဖြစ်ရာ စာရေးသူဝယ်သမျှ တန်ဖိုးထဲမှ သူခံစားခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။အပြင်တွင် သေရောကြေရော ၂၀၀၀ ခန့် ပေးရမည့် သွားတိုက်ဆေးကို သူ့ထံမှ ၁၅၀၀၀ ဖြင့် ဝယ်လိုက်ရပါသည်။
၂ ပတ် တစ်ခါခန့် တပည့်မလေး ရောက်လာတတ်ပါသည်။ပစ္စည်းများ လာရောင်းပါသည်။သူတက်ကြွလျက်ရှိသည်။သူ့ကို ကုမ္ပဏီက မကြာမီ ထိုင်းသို့ စေလွှတ်မည်ဆို၏။သည်လိုဆိုတော့လည်း မဆိုးပါလားဟု တွေးမိပါသည်။သို့သော် နောက်တစ်လခန့်အကြာ၌ တပည့်မလေး ရောက်လာချိန်တွင် မျက်နှာမသာယာတော့ပါ။
ထိုင်းကို မိမိစရိတ်ဖြင့် မိမိသွားရခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်းစကားပြန်မှ တဆင့်ပေးသည့် တစ်ရက်သင်တန်းကလည်း ဘာမှထွေထွေထူးထူးမဟုတ်။အပေါစား တည်းခိုခန်းတွင် နေခဲ့ရစားခဲ့ရသည်။ပထမဆုံးအကြိမ် တပည့်မလေးထံမှ ညည်းညူသံ ထွက်လာသည်။
“ဆရာမပြောသလိုပါပဲ။အသင်းဝင်တွေကို မက်လုံးပေးပြီး လုပ်စားနေတာပါ ဆရာမရယ်။တချို့ဆို ကျွန်မထက် အဖြစ်ဆိုးပါတယ်။ကျွန်မက ယောက္ခမနဲ့ မနေချင်လို့ အိမ်ခွဲနေချင်လို့ ငွေရမလား လုပ်တာပါ ဆရာမရယ်။တချို့ နယ်က ကလေးတွေဆို ခြံပေါင် လယ်ပေါင်နဲ့ ဝင်လုပ်နေကြတာ။သူတို့လည်း မှားမှန်းသိပေမဲ့ ငွေက ပစ္စည်းဝယ်ရတဲ့ထဲ ဝင်နေတော့ ဆက်လုပ်နေကြတာပါ။”
နောက် ၂ ပတ်အကြာတွင် ထိုတပည့်မလေး သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားပါသည်။အဆိုပါ ထိုင်းအလှကုန်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး ယူရင်ကုန်ပြီဆိုလား နာမည်မမှတ်မိတော့သော ကုမ္ပဏီသို့ ဝင်ဝင်ခြင်း ငွေ ၁၀ သိန်းဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ရသည်။ထိုပစ္စည်းများကို လည်ရောင်းရသည်။မစားရဝခမန်း စကားများ ပြောရသည်။တင်နေသော ကြွေးတွေကလည်း ပိလာသည်။သို့ဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် နောင်တရမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲ သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားသည်။တပည့်မလေး ဆုံးပါးခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ခန့် ရှိပါပြီ။မကြာမီက အစိုးရက ဥပဒေဖြင့် MLM လုပ်ငန်းများကို ပိတ်လိုက်သောအခါ တပည့်မလေးသာ တမလွန်က မြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်မည်ဆိုပါက ဝမ်းမြောက်ရှာမည်ဟု တွေးတောမိပါသည်။
ဖေ့စ်ဘုတ်ဖွင့်လျှင် ဖတ်ရသည့် ရဲသတင်း၊ မာတုကာမနှင့် နေထိုင်သည့် ဘုန်းကြီးသတင်း၊ သေနတ်ကိုင်မည်ဟု ကြိမ်းမောင်းသည့် ဘုန်းကြီးသတင်းများအပြီး သေနတ်ကိုင်ထားသော ရသေ့ဝတ် အမျိုးသမီးပုံ တက်လာပြီး သူနှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းများပါ တက်လာပါသည်။ရသေ့မသည် ဟိတ်နှင့် ဟန်နှင့် ဗေဒင်ဟောခန်း ဖွင့်ထားပြီး လိမ်ထားသည့် ငွေများမှာ နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။အလိမ်ခံရသူများမှာလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ။ယခုအလိမ်ခံရသူများက တိုင်ကြတောကြ ဝိုင်းကြသောအခါ အဆိုပါရသေ့မသည် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားပြီ ဆိုပါသည်။
၈၈ အရေးအခင်းတုန်းက အာဏာပိုင်တို့ အလိုရှိသူများမှာ ဘယ်နေရာပုန်းပုန်း ဖမ်းမမိသည်ဟု မရှိစေရ။ပိုက်စိတ်တိုက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်မှာ အားလုံးအသိ။ယခု ရသေ့မသည် အသွင်ပြောင်းထားဦးတော့ တကယ်အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် ပြေးပေါက်မရှိပါ။သို့သော် တိုက်ခန်းကြီးပေါ်တွင် ခမ်းနားထယ်ဝါစွာ ဟိတ်ဟန်တစ်လုံးနှင့် အယုံသွင်းပြီး အောင်မြင်စွာ ငွေအမြာက်အမြား လိမ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ယခုမှ သူ့နောက်ကြောင်းကို လိုက်ကြရာ ထောင်သုံးခါကျပြီး လွတ်လာသူ ဖြစ်နေသည်။မယ်တော်ကြီးဟု ကုန်းဦးချသူများကို အဘယ်မျှ ကြိတ်ရယ်မောသွားလေမည်ကား မသိ။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှ ယနေ့ထိ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ MLM ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ရသေ့မ နန္ဒမာလာ ငွေလိမ်မှုတို့သည် အကြီးစား လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ ဖြစ်ကြပါသည်။သည်ကြားထဲ ထီပေါက်သည်ဟု လိမ်လည်မှု၊ ကံစမ်းမဲပေါက်သည်ဟု လိမ်လည်မှု၊ ရဲဟန်ဆောင်မှု၊ စစ်ဗိုလ်ဟန်ဆောင်မှုများ ဒင်းကြမ်းထခဲ့ပါသည်။မြန်မာများ ဘာကြောင့် အလွယ်တကူ အကြိမ်ကြိမ် လိမ်ညာအသုံးချ ခံကြရပါသနည်း အဖြေရှာသော် မြန်မာတို့၏ ယုံလွယ်သော အကျင့်နှင့် လောဘဦးစီးလာသောအခါ အမှန်ကို မမြင်နိုင်တော့ခြင်း၊ မဆင်ခြင် မသုံးသပ်နိုင်ခြင်းဟူသည့် အားနည်းချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။တစ်ဘက်က ကျလောက်အောင် ပြောသောအခါ သေသေချာချာ မဆန်းစစ်တော့ဘဲ အလွယ်တကူယုံခြင်း အကျင့်ကို မြန်မာတို့တွင် စွဲနေပါသည်။ထို့ပြင် ငါးဖမ်းရန် ငါးစာချကျွေးသည်၌ ငါးစာကိုသာမြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်ဘဲ စားလိုဇော (ရလိုဇော) ဖြင့် ငါးစာကို ဟပ်လိုက်ရာ ငါးမျှားချိတ်တွင် တန်းလန်းပါရသော ငါးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြရပါသည်။
MLM ရောင်းဝယ်ရေး စနစ်သည် လိမ်ညာမှုမဟုတ်ပါဟု စောဒကတက်သူများ ရှိကြပါမည်။ရောင်းသူဝယ်သူ ကျေနပ်၍ လုပ်ကိုင်ကြသည့် အလုပ်ဟု ဆင်ခြေပေးမည်ပင်။တစ်ကျပ်တန်သော ပစ္စည်းကို ၁၀ ဖြင့် ဝယ်ရပြီး တစ်ထောင်ဖြင့် ပြန်ရောင်းရသည့် အလုပ်သည် လိမ်ညာလှည့်ဖြားခြင်း ပါဝင်နေပါသည်။ဧရာမြေကဲ့သို့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ယုံကြည်အပ်နှံသူများ၏ ငွေများကို ‘မ’ ယူသွားသူများအားလုံး ဘေးကင်းရန်ကွာ လွတ်ကင်းခဲ့ကြပါသည်။MLM လုပ်ငန်းကို အင်အယ်လ်ဒီအစိုးရ လက်ထက်တွင် အစသတ်ပေးလိုက်ပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တွင်တွင်ပြောခဲ့သော ပြောနေဆဲဖြစ်သော လက်ရှိအစိုးရသည် ဂန်းကိုင်ခဲ့သည့် မယ်တော်ကြီးကို ဥပဒေဘောင်တွင်း ဆွဲခေါ်လာနိုင်မည်လား အလိမ်ခံရသူများက မျှော်လင့်နေကြပါသည်။အစိုးရသည် မယ်တော်ကြီးကို ဆွဲခေါ်လာနိုင်စွမ်းရှိလျှက် နမူနာပြ စစ်ဆေးအပြစ်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက တရားဥပဒေစိုမိုးမှု အကျိုးကို အတန်အသင့် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဟု လက်ခံကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ - ၈